Google မှာယောင်လိုတောင်ရိုက်ပြီး လုံးဝမရှာသင့်တဲ့ စာသားများ - Myanmarload
Google မှာယောင်လိုတောင်ရိုက်ပြီး လုံးဝမရှာသင့်တဲ့ စာသားများ
လွန်ခဲ့သော ၃ လ က 16:42 July 12, 2019
ပရိသတ်တွေ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Google မှာဘာမဆို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာကိုပေါ့။ သူနဲ့အလာတးတဲ့ဟာ တွေလဲရှိပေမဲ့ Google ကိုပဲအသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ မသိမတက်တဲ့အရာတွေ လေ့လာချင်တာတွေ စတာတွေကို Google မှာအလွယ်တကူရှာဖွေ့တွေရှိနိုင်တာမို့ အဲ့ကနေပဲ ရှာတက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုဖော်ပြသွားတဲ့ စာသားတွေကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ယောင်လိုတောင်မရှာသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ရှာပြီရင်လဲ မတတ်နိုင်ပါဘူး...အဲ့အတွက်ကြောင့် ရှာသင့်မရှာသင့်ကို အောက်မှာအဲ့စာသားတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖော်ပြသွားမှာပါ။စာဖတ်ပြီးလို့ရှာဖွေပြီး ဝင်ကြည် မကြည့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
10. Daniel Philip Petry And Gabriel Kuhn
Daniel နဲ့ Gabrie တို့ဟာဆိုရင် အိမ်နီးနာချင်းတွေဖြစ်ကာ ခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ online game ဖြစ်တဲ့ ‘Tibia’ ကိုဆော့ရင်း Daniel က Gabriel သူ့ကို Cheat တယ်ဆိုပြီး ထင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ Gabrielတစ်ယောက်ထဲအိမ်မှာရှိချိန် Daniel ကသွားပြီး သူ့ကိုထိုးကြိတ်ကာ Rape ပြီးနောက်မှာတော့ Kuhn ကိုသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သံနန်းလွန်းကြိုးနဲ့ သူရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကို ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
9.2Girls 1 Cup
၂၀၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ Brazilian film trailer တစ်ခုဖြစ်တဲ့2Girls,1 Cup ဟာဆိုရင် You Tube မှာ virus တစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Video ကတော့ ကောင်မလေးနှဏ်ယောက်ဟာ ခွက်တစ်ခုထဲမှာ မစင်ကိုထည့်ပြီး စားသောက်ကြကာ အဲ့နောက်မှာတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို တစ်ယောက် ပြန်အန်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာကိုတော့ ပရိသတ်တော်တော်များများသိကြမှာပါ။ သူကတော့ ရောဂါတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပြီး ဘာရောဂါလဲဆိုတော့ အပေါက်အပေါက်တွေအများကြီး ပြွတ်သိပ်နေသလို ဟာတွေကို ကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုဖြစ်တာပါ။ တော်ရုံလူတွေ မကြည့်ရဲကြပါဘူး။
Jiggers ဒါမှမဟုတ် Chigoe Flea ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ parasitic insect တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတုမှာ တွေ့ရှိတက်ပါတယ်။ သူတို့ကိုပေါ့သေသေးမထင်ပါနဲ့....လူတွေကို စားသောက်တဲ့ သဲထဲက သန်းတွေလိုပါပဲ...သူတို့က စိုစွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ သဲတွေထဲမှာနေပါတယ်။ တစ်ခါလူကိုယ်ထဲဝင်သွားပြီးဆိုရင် ဥတွေများစွာဥပြီး လူကိုဆိုးဆိုးရွာရွာဖြစ်စေပါတယ်။ ရှာပြီရင်လဲ ပုံတွေမကြည့်မိရင်ကောင်းပါတယ်။
6. Three guys, One Hammer
သူတို့တွေက အစဉ်လိုက် လူသတ်သမားတွေပဲဖြစ်ကာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် June နဲ့ July လက လူတွေကိုအစဉ်လိုက် သတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့ လူသုံးယောက်ဟာ ၂၁ယောက်ကိုသတ်ဖို့ ပိုက်ဆံအများကြီးနဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ရကာ အကြောင်းအရင်းကတော့ Website တစ်ခုက သူတို့ကို လူတွေအုန်းလိုက်ကြည့်မဲ့ Video ကိုဖန်တီးခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ Video ထဲမှာ အသက် ၄၈နှစ်အရွယ် လူအသတ်ခံရတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
5. The Exorcism of Anneliese Michel
Anneliese Michel ဆိုတဲ့ ကောင်းမလေးကတော့ ရောဂါတစ်ခုကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံးကိုတက်ခဲ့ရပြီး ထိတ်လန့် စိတ်ချောက်ခြားမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ သူအသက် ၂၀ရောက်တဲ့ချိန်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့ ပွုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စတွေ သူမစတင်ပြုလုပ်လာတာကြောင့် ဘုန်ကြီးနှစ်ပါးကို ခေါ်ကာ ကုသခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုလဲ နတ်ဆိုးလို့ သူ့မိဘတွေက သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကြောင့် ခေါ်ပြီးကုသလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကုသတဲ့အချိန်ကစပြီး သူမဟာ အစာမစားတော့တာကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့ပြီး ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ကာ သေခဲ့ပါတယ်။
4. 1 Lunatic 1 Ice Pick
၁၁ မိနစ်သာရှိတဲ့ Video လေးတစ်ခုပါ... Luka Magnotta ဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်က Lin Jun ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို ရေခဲပေါက်ချွန်းနဲ့ သတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သတ်ပြီးနောက် အစိတ်အပိုင်းတွေကို မူလတန်းကျောင်း နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပေးပါတယ်။ အာ့တင်မဟုတ်ပဲ သူရဲ့ခွေးကိုလဲ ကျွေးပါသေးတယ်။
3. Best Gore
Best Gore ကတော့ လူတွေမကြည့်ရဲ မကြည့်သင့်တဲ့ ထိတ်လန့်စရာ စတာတွေကို တင်ပေးတဲ့ Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိတ်လန့်စရာတွေကိုပဲ တင်တာဖြစ်တာမို့ ဝင်မကြည့်သင့်ပါဘူး။ အဲ့ Site ကလဲ Luka Magnotta ရဲ့ Video ကို 1 Lunatic 1 Ice Pick ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့တင်ပြီးနော် နာမည်မရှိတော့ပါဘူး။
2. Body Farm
Body Farm ကတော့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ထိန်လန့်စရာ အရာတွေ ဥပမာ လူသတ်မှုတွေ ခြောက်ခြားစရာတွေကို လေ့လာဖို့အတွက် နေရာတစ်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. Anatoly Slivko
Anatoly Slivko ကတော့ နာမည်ဆိုးရွားတဲ့ အစဉ်လိုက်လူသတ်သမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nazi experiments အတွက် သူ့အသက် ၂၃နှစ်အရွယ်မှာ လူငယ် ၄၃ယောက်ကို ခေါ်ပြီး Video ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Video ကတော့ အဲ့လူငယ်တွေကို သတိလစ်တဲ့ထိ ထိုးနှက်တာပဲဖြစ်ကာ သူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ လူငယ်တွေကို ပြန်လည်သတိရအောင်ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကဒေါသထွက်လာပြီး လူငယ်တွေကို ဆုတ်ဖြဲကာ အပိုင်းပိုင်း လုပ်ပြီး အမျိုးမျိုးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံတွေရောဘာတွေရော မှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ ခုဖော်ပြသွားတာတွေကို ရှာမဖွေကြည့်ရင် ကောင်းပါမယ်။
Page generated in 0.0356 seconds with5database query and6memcached query.